Simple Tricks Kubva Semalt Ichaita Kuti Shoko Rako Rokushandura Shoko Rive Sekuchengeteka Sezvinogona Kuitika
Indaneti inopa mikana yakawanda yevanhu vari kutarisa vazhinjie-commerce websites kuti vaite zvavanoedza. Somuenzaniso, mamwe mabhizinesi ari kutora nzira yekutengeserana e-commerce, iyo inouya nevakawandakukwirira uye kuderera. Semuenzaniso, nzvimbo dzinoiswa pasi pevashandi. Vatengesi vanokanganisa kuchengetedza kwekuchengetedza nenzira dzakasiyana-siyana, izvo zvinogonesaivo kuti vawane kupinda kusina mvumo kune dzakasiyana-siyana zvekutengeserana kwe-e-commerce pamwe nekubva kure nekodzero yemutengi. Kuti ugare wakachengeteka kubvaidzi zvinopisa njere, iwe unoda kunzwisisa kuti dzinoshanda sei.
WordPress ndiyo inonyanya kugadziriswa kwehutano hwehutano - oculos barato. Somuenzaniso, WordPressowns about 24% yewebsite yepaIndaneti munyika yose. Vane hurumende iyi inokonzerwa nezvikonzero zvakawanda, izvo zvinoratidzika kuti zvinofadza bhizinesi ravo.WordPress ine zvigadzirwa zvakawanda nemapulagi ayo anoita kuti vashandisi vashandise maitiro akawanda eSOO nekambani yekudhinda internet. Zvisinei, sevanhu vakawandashandisa WordPress nokuda kwekuda kwavo webhusaiti, vanotengesa uye dzimwe njodzi dzekukuwana kuwana WordPress mgodi yegoridhe zvakare. ShokoPress rinozivikanwa uye rinokurumidza, iroinoita kuti ichinyore kana mamwe emapulagi ayo ari nyore. Munhu anokanganisa anogona kuwana ruzivo rwakanyanya kubva pane chero nzvimbo yega pasina kubvumirwa kwatenzi.
Oliver King, the Semalt Mutengi Wakabudirira Muteereri, anozarura mazano anotevera ekusimbisa WordPress kuchengetedza paunenge uita nzvimbo:
Gara uchikwanisa kusvika
Kushandisa virus yakachengeteka scanner inogona kuchengeta kombiyuta yako isina mahwanda nemavarasi..Zvakakosha kuve nechokwadi chokuti software iri mumashini yako ndiyo mapurogiramu akakodzera uye inovimbisa kuti vari kuita basa ravo chaiyo. Ndapotabvisa pakarepo purogiramu ipi neipi inotyisa iyo yakabva kwauri isingazikamwi iwe. Izvo zviyero zvakafanana zvinoshandiswa kune ve browsers zvakare. Usabvumira cheroplugin kuti uite pane browser yako. Vanogona kunge vane zvinyorwa, izvo zvinoshandura zvinoshamisa pamakombiyuta enyu.
Dzivisa spam uye phishing
Usanamatira chero chikwata pane email ye spam. Izvi zvinobatanidza kuita zvimwe zvemuchinjikwasite attack. Zvinogonawo kunge zvine zvigadziro, izvo zvineTrojans. Nzira yakawanda yekuchera vatengesi kazhinji inotumira rondedzero muneshoko rakanyorwa, iro rine Trojans. Sezvo mutengi anofara achizarura faira kuti aone zviri mukati maro, inofumura hutachiona hutachiwana husekombiyuta. Vanhu vazhinji vanorasikirwa nemashoko anokosha nenzira iyi. Hacked passwords anogonawo kuita zvinhu zvakawanda zvekunyengedza zvakadarosekutengesa mari.
Patinogadzira mawebsite akawanda, ruzivo rwevashandi, pamwe nechinangwa chokupedzisira, kazhinjichinangwa chedu. Vakawanda vekutsvaga webhusaiti vanoisa pfungwa pa SEO uye vachiita kuti mutengi aende kuburikidza nekutenga nzira nyore nyore. Zvisinei, tinokundikana kufungamune mupfumi mupfungwa. Somugumisiro, kune 90977 pangozi yekutengesa inoitika maminitsi ose pamusoro peShokoPress nzvimbo. Zvakakosha kudzidza iyi nzira pamwe nekuita mawebsite edu akachengetedzeka uye huck proof. Iwe unogona kuita kuti site yako ive yakachengeteka yeShokoPress hackszvakadai sewe password spoofing pamwe chete nedzimwe nhanho kuedza kushandisa gwaro iri. Kuchengetedzwa kwewebsite yako uye yevashandi vako kunogona kurambain check. Uyezve, webhusaiti yakachengeteka inoita zvakanaka paSERPs ichiita SEO yako uye kushambadzira kuedza kunobereka michero.